Rutsva rwevatakuri rekodhi rakawanikwa paRA
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Rutsva rwevatakuri rekodhi rakawanikwa paRA
Airlines • nhandare yendege • Brazil Kupwanya Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bulgaria Kuputsa Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Greece Kupwanya Nhau • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • Dhinda Zviziviso • Russia Kuputsa Nhau • Slovenia Kuvhuna Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Frankfurt Airport (FRA) yakashandira vanopfuura mamirioni 69.5 mamirioni mu2018, nokudaro vachitumira chinyorwa chitsva chakakwirira munhoroondo yendege.
Kuenzaniswa na2017, traffic panhandare huru yeGerman yakakura nevamwe vangasvika mamirioni mashanu kana 5 muzana. Uku kukura kwakasimba kwakakonzerwa nekuvhurwa kwenzira dzakawanda kuenda kunzvimbo nyowani kubva kuRA uye kubva kunhandare dzendege dzinowedzera mafambiro ekufamba.
Achitaura nezvehuwandu hwemotokari dza2018, sachigaro webhodhi guru reFraport AG, Stefan Schulte akati: “Mwaka wapfuura wakaratidza zvakare kuti panoramba paine kudiwa kukuru kwendege. MuFrankfurt, takawana hukuru hwepamusoro hwevatakuri munhoroondo yedu. Izvi zvinosimbisa chinzvimbo cheFrankfurt Airport seimwe yenzvimbo dzeEurope dzinotungamira nendege. Panguva imwecheteyo, kukura kunoshamisa mukutyaira mumhepo kwakakonzera matambudziko makuru kwatiri nekambani yese yekubhururuka. Pamwe chete nevatinoshanda navo, tiri kutora matanho ekudzorera nekusimudzira kubata nguva uye kuvimbika mumhepo
Mugore-izere gore ra2018, kufamba kwendege kuFRA kwakakwira ne7.7 muzana kusvika pa512,115 kutora uye kumhara mu2018. Kuunganidzwa kwehuremu hwekutakura (MTOWs) kwakawedzerawo ne5.1 muzana kusvika kumamwe mamirioni 31.6 metric. Cargo throughput (airfreight + airmail) yakatumira kuderera kwe0.7 muzana kuderera kusvika pamamirioni emamirioni mazana maviri nezviuru, zvichiratidza kuwedzera kusagadzikana mukutengeserana kwepasirese, kunyanya mukati mehafu yepiri yegore.
Muna Zvita 2018, vanopfuura mamirioni 4.9 vafambi vakafamba kuburikidza neFrankfurt Airport - kuwedzera kwe7.8 muzana zvichienzaniswa naDecember 2017. Kufamba kwendege kwakakwira ne9.0 muzana kuenda ku38,324 kutora uye kumhara, nepo yakaunganidzwa MTOWs yakakura ne6.5 muzana kusvika ingangoita mamirioni 2.4 metric matani. Cargo throughput (airmail + airfreight) yakawedzerwa ne1.9 muzana kusvika 183,674 metric ton mumwedzi wekuzivisa.
Nhandare dzendege muFraport yepasi rose yakaratidzawo kukura kunooneka muna 2018. CEO Schulte vakati: “Pamusoro peFrankfurt, nhandare zhinji dzeGroup pasi rese dzakawana zvinyorwa zvitsva zvevatakuri gore rapfuura. Isu tinoramba tichiisa mari munhandare dzepasirose yedu yepasi rose, nekudaro tichivimbisa kukura kwavo kwenguva refu. Kuti tigadzire kuwanda, isu pari zvino tiri kuita zvirongwa zvikuru zvekuwedzera panhandare dzeGroup, kunyanya kuGreece, Brazil nePeru. ”
MuSlovenia, Ljubljana Airport (LJU) yakatumira 7.7 muzana yekuwedzera kwemotokari kune vanopfuura mamirioni 1.8 muna 2018. Traffic yakasanganiswa panhandare mbiri dzeBrazil dzeFortaleza (FOR) nePorto Alegre (POA) yakakwira ne7.0 muzana kune vamwe vanhu vanosvika mamirioni 14.9. Traffic panhandare gumi nenhatu dzeGreek nhandare dzakakwira ne14 muzana kusvika kune vangangoita mamirioni makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe. Masuwo matatu akanyanya kubatikana muFraport's Greek portfolio aive Thessaloniki Airport (SKG) ine vamwe 8.9 mamirioni vafambi (vanokwira 29.9 muzana), Rhodes Airport (RHO) ine vanhu vanosvika 6.7 mamirioni (kumusoro kwe7.1 muzana), uye Corfu Airport (CFU) uko traffic yakakwira ne 5.6 muzana kusvika vangangoita mamirioni 5.0 vafambi.
Lima Airport (LIM) muguta guru rePeru yakagamuchira vanopfuura mamirioni makumi maviri nemakumi maviri nevatakuri muna 22.1, zvichimiririra kuwedzera kwe2018 muzana.
Pamhenderekedzo yeBulgaria Nhema Gungwa, nhandare dzeTwin Star dzeVarna (VAR) neBurgas (BOJ) dzakavhara gore pamwe nekukura kwemotokari kwakazara kwe12.2 muzana kune vangangoita mamirioni 5.6. Antalya Airport (AYT) muTurkey yakaona kufambiswa kwemotokari ne22.5 muzana kusvika vangangoita 32.3 mamirioni. Pulkovo Airport (LED) muSt. Petersburg, Russia yakashandira vanopfuura mamirioni 18.1 vafambi - kuwedzera kwe12.4 muzana. Vamwe vafambi vanosvika mamirioni 44.7 vakashandisa Xi'an Airport (XIY) muChina, vanokwira 6.7 muzana.